တညလုံး ဖဲရိုကျ ပွနျလာတာတောငျ အိမျက မိနျးမက ထိုငျရှိခိုးရတဲ့ မောငျခှေးရဲ့ အကွံ - YATHAZONE
ည ၉ နာရီလောကျ လငျမယား၂ ယောကျ အိမျပွနျကွတော့ လမျးတဈဝကျမှာ မကျြနှာဖုံးစှတျနဲ့လူ ၄ယောကျ ထှကျလာ ပါတယျ… ဓါးကိုစီကိုငျထားပွီးတော့.. ခေါငျးဆောငျဖွဈသူလို့ ထငျရတဲ့သူက…
“လကျမွှောကျထားပါ အျောမယျမကွံနဲ့…. ဓါးကမကျြစိမပါဘူး… မငျးတို့ ၂ ယောကျထဲက တဈယောကျနခေဲ့ရမယျ… ပွနျပေးဆှဲတာပါ.. ရဲတိုငျရငျတော့ အလောငျးလာကောကျရမယျ… ဘယျသူ နခေဲ့မလဲပွော…
“ယောင်ျကြားဖွဈသူက ခကျြခငျြး ရငျကိုကော့ကာ….“ကြှနျတျောနခေဲ့မယျ…. မိနျးမကို ပွနျလှတျပေးပါ…. မိနျးမ မငျးအိမျပွနျနှငျ့ ရဲမတိုငျနဲ့နျော…. ငါသူတို့နဲ့ ညှိနိုငျးပွီး ဖုနျးပွနျ ဆကျမယျ…”
မိနျးမဖွဈသူ ပွနျသှားသောအခါ လူဆိုးလေးယောကျလုံး ခေါငျးစှတျကိုခြှတျကာ… “ခှီးတဲ့မှပဲ…. မငျးကို ဖဲချေါရိုကျဖို့က လူကွမျးတောငျ လုပျလိုကျရသေးတယျ….. တဈဝိုငျးလိုနလေို့သာ ကွံဖနျပွီး ချေါရတာ”
နာရီဝကျလောကျနတေော့ ယောင်ျကြားဖွဈသူက သူ့မိနျးမဖုနျးကို မကျဆေ့ ပို့လိုကျပါတယျ…။ သူ့ ATM ကဒျထဲကို ၅ သိနျး ခကျြခငျြးလှဲပေးဖို့ နဲ့ ငှရေရငျ သူတို့က နောကျနမေ့နကျ အသကျရှငျလကျြ ပွနျလှတျပေးမယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး ရေးပို့ လိုကျတာပါ။
နောကျနမေ့နကျ အိမျပွနျရောကျတာနဲ့ ဇနီးသညျက ငိုယိုပွီး ထိုငျရှိခိုးကာ…. ယောကျင်ျကြားရယျ… အိမျဦးနတျ ပီသပါပတေ့ယျ.. နောကျနောငျ မပွဈမှားတော့ပါဘူး… ယောင်ျကြားပွောစကားကို အကုနျ နားထောငျပါ့မယျ… ဆိုပွီး ဝနျခတြောငျးပနျလသေတဲ့.
ည ၉ နာရီလောက် လင်မယား၂ ယောက် အိမ်ပြန်ကြတော့ လမ်းတစ်ဝက်မှာ မျက်နှာဖုံးစွတ်နဲ့လူ ၄ယောက် ထွက်လာ ပါတယ်… ဓါးကိုစီကိုင်ထားပြီးတော့.. ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူလို့ ထင်ရတဲ့သူက…
“လက်မြှောက်ထားပါ အော်မယ်မကြံနဲ့…. ဓါးကမျက်စိမပါဘူး… မင်းတို့ ၂ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်နေခဲ့ရမယ်… ပြန်ပေးဆွဲတာပါ.. ရဲတိုင်ရင်တော့ အလောင်းလာကောက်ရမယ်… ဘယ်သူ နေခဲ့မလဲပြော…
“ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ချက်ချင်း ရင်ကိုကော့ကာ….“ကျွန်တော်နေခဲ့မယ်…. မိန်းမကို ပြန်လွတ်ပေးပါ…. မိန်းမ မင်းအိမ်ပြန်နှင့် ရဲမတိုင်နဲ့နော်…. ငါသူတို့နဲ့ ညှိနိုင်းပြီး ဖုန်းပြန် ဆက်မယ်…”
မိန်းမဖြစ်သူ ပြန်သွားသောအခါ လူဆိုးလေးယောက်လုံး ခေါင်းစွတ်ကိုချွတ်ကာ… “ခွီးတဲ့မှပဲ…. မင်းကို ဖဲခေါ်ရိုက်ဖို့က လူကြမ်းတောင် လုပ်လိုက်ရသေးတယ်….. တစ်ဝိုင်းလိုနေလို့သာ ကြံဖန်ပြီး ခေါ်ရတာ”
နာရီဝက်လောက်နေတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမဖုန်းကို မက်ဆေ့ ပို့လိုက်ပါတယ်…။ သူ့ ATM ကဒ်ထဲကို ၅ သိန်း ချက်ချင်းလွဲပေးဖို့ နဲ့ ငွေရရင် သူတို့က နောက်နေ့မနက် အသက်ရှင်လျက် ပြန်လွတ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ရေးပို့ လိုက်တာပါ။
နောက်နေ့မနက် အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဇနီးသည်က ငိုယိုပြီး ထိုင်ရှိခိုးကာ…. ယောက်င်္ကျားရယ်… အိမ်ဦးနတ် ပီသပါပေ့တယ်.. နောက်နောင် မပြစ်မှားတော့ပါဘူး… ယောင်္ကျားပြောစကားကို အကုန် နားထောင်ပါ့မယ်… ဆိုပြီး ဝန်ချတောင်းပန်လေသတဲ့.
Total Users : 253895
Total views : 689020